COMPAGNIE VIDZAR: Mampiseho ireo vokatra fanondrana vaovao mandritra ny FIM | Madatopinfo
COMPAGNIE VIDZAR: Mampiseho ireo vokatra fanondrana vaovao mandritra ny FIM
Mandray anjara amin’ny FIM (Foire Internationale de Madagascar) eny amin’ny Forello Tanjombato mandritra ny efatra andro ny Compagnie Vidzar. Ity orinasa ity izay tsy mitsahatra ny manolotra vokatra tsara ho an’ny mpanjifa. Efa fanta-daza maneran-tany rahateo ihany koa ny lazany sy ny hatsaran’ny kalitao. Manamafy izany indrindra ny Tale miandraikitra ny famokarana, Mamy Rakotoson: “Manondrana any ivelany isika ary rehefa izany dia mamokatra, ka manome asa sy miaro ny mpiasa Malagasy; ao anatin’ny tarigetranay rahateo izany. Ka izany no mahatonga anay mandray anjara feno amin’ny fampiroboroboana ny toe-karena tahaka izao”.
Efa an-dalam-panapariahana ny vokatra vokarin’ny Compagnie Vidzar mankany amin’ny Faritra Erôpa antsinanana iny raha efa rakotr’izany kosa ny firenena 14 ao Erôpa, any Canada ary any Etazonia. Raha ho an’ity orinasa oty manokana, isan’ny mampiavaka azy amin’ity FIM 2018 ity ny fisian’ny toerana tena miavaka tokoa raha oharina ireo mpandray anjara hafa, “L’Ecrin de Dzama”. Tsikaritra teny an-toerana fa tena mahasarika mpitsidika maro ny tranoheva misy azy.
Tanjon’ny Compagnie Vidzar amin’ity andiany faha-13 ny FIM ity ny hampahafantatra ireo marika marobe vaovao sy hizaràna ireo vina tsara indrindra. Nandritra izay 35 taona nisian’izay, fahombiazana tanteraka ho an’ity orinasa ity ary tsy mitsaha-mivoatra hatrany ireo vokatra.
Marihina fa hatramin’ny Alahady izao dia ho hita eny Tanjombato ireo vokatra vaovao vokarin’ny Compagnie Vidzar.